Usoro Idobe Ihe Mkpofu Ahihia
Usoro Idobe Ihe Mkpofu Ahihia Ududo ududo bu ihe zuru uwa na aku na uba maka idozi ihe ndi ozo. A na - ekepụta ìgwè ndị eji eme mkpọtụ maka ụlọ, ọfịs ma ọ bụ n'èzí. Otu ihe nwere akụkụ abụọ dị mkpa: etiti na akpa. A na-ebugharị ya site n'otu ebe gaa ebe ọzọ, adaba adaba maka ibuga na ịkwakọba ihe, n'ihi na ọ nwere ike ịdị larịị mgbe anaghị eji ya. Ndị na-azụ ahịa na-enye iwu ọnụọgụ udide na ntanetị ebe ha nwere ike ịhọrọ nha, ọnụ ọgụgụ Spider Bins na ụdị akpa dị ka mkpa ha si dị.
Tọọzdee 26 Mee 2022
Wenezdee 25 Mee 2022
Tiuzdee 24 Mee 2022
Mọnde 23 Mee 2022
Nri Ice Nature abụrụla otu n'ime isi mmalite dị mkpa nke mmụọ nsọ maka ndị na-ese ihe. Uche a batara n’obi ndị na-ese ihe site n’ilebanye anya na mbara igwe na onyinyo nke Milk Way Galaxy. Akụkụ kachasị mkpa na atụmatụ a bụ ịmepụta ụdị pụrụ iche. Ọtụtụ ihe osise dị n’ahịa ahụ lekwasịrị anya n’ime ka ice kacha pụta ìhè ma na njiripụta a gosipụtara, ndị mmepụta ahụ na-ama ụma elekwasị anya n’ụdị ndị mineral na-eme ebe mmiri na-aghọrọ ice, iji dokwuo anya na ndị na-emepụta ahụ gbanwere ntụpọ eke. rụpụta ezigbo ọmarịcha. Ihe okike a na-eme ka okirikiri a gbaa okirikiri.
Mbọsị Ụka 22 Mee 2022
Sịga X mkpu, bụ mkpu maka ndị na - ese anwụrụ iji mee ka ha mata ihe ha na - eme onwe ha ka ha na - eme ya. Ihe osise a bu usoro ohuru nke nzacha anwuru. Ihe osise a nwere ike ịbụ ezigbo nnọchi maka mgbasa ozi dị oke ọnụ megide ị smokingụ sịga ma nwee mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị na-ese anwụrụ karịa mgbasa ozi ọ bụla ọzọ na-adịghị mma. na puff ọ bụla sket a ga-apụta karịa ka ọ ga-adị, ị ga-ahụ obi gị na-agba ọchịchịrị ma mara ihe na-eme gị.
Opx2 Nwụnye Optic Satọdee 2 Julaị
Vivit Collection Ọla Ntị Na Mgbanaka Fraịdee 1 Julaị
FinaMill Igwe Nri Kichin Mara Mma Tọọzdee 30 Juun
Usoro Idobe Ihe Mkpofu Ahihia Cinnamon Na Mmanụ Nri Ihe Ọ Beụverageụ Nri Ice Sịga